Soo dejisan Comodo Cloud Antivirus 1.21.465847.842 – Vessoft
WindowsAmnigaAntivirusesComodo Cloud Antivirus
Bogga rasmiga ah: Comodo Cloud Antivirus
Comodo Cloud Antivirus – oo ah antivirus leh dhowr farsamood oo ilaalin ah si loo ogaado looguna naquleeyo noocyada kala duwan ee fayrasyada. Software wuxuu isticmaalaa tiknoolajiyada casriga casriga ah si uu u soo diro xogta loo adeegsado server-kiisa iyo falanqee faylasha aan la garanayn ee asalka ah. Comodo Cloud Antivirus waxay ku baari kartaa qaybaha ugu muhiimsan ee nidaamka habka ugu dhaqsaha badan, si xushmad leh u fiiri faylasha ama faylasha, oo samee baaritaan kombuyuutar oo buuxa sida baahida loo qabo user. Software wuxuu si joogta ah ula socdaa dhammaan faylasha iyo hababka falalka shakiga leh isla markiiba uga digay isticmaalaha ku saabsan waxqabadkooda shakiga ah ee khatar gelin kara amniga nidaamka. Comodo Cloud Antivirus waxay si otomaatig ah u dhajisaa faylasha iyo barnaamijyada si ay u helaan goobo fure ah si ay u maamulaan faylasha aan la garanayn iyo nacnaca mal-nimo-maalmood iyada oo aan khatar gelin computer-kaaga. Sidoo kale, Comodo Cloud Antivirus ayaa ka digtay isticmaalaha ku saabsan isku dayga software-ka xaasidnimo ah si uu u sameeyo isbeddel aan la oggolayn oo ku saabsan goobaha shabakadda.
Baaritaanka faylka ee darbiga
Hubi faylasha laga shakiyo ee sanduuqa
Kala saaridda faylasha khatarta ah si karantiilka
Soo dejisan Comodo Cloud Antivirus
Faallo ku saabsan Comodo Cloud Antivirus
Comodo Cloud Antivirus Xirfadaha la xiriira